CALAAMADAHA KANSARKA MA U BAAHAN YAHAY IGNORE - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB • WAXBARASHADA • DARYEELKA CAAFIMAAD • SAYNISKA • Uncategorized »CALAAMADAHA KANSARKA LAGA HELO IGNORE
CALAAMADAHA KANSARKA MA U BAAHAN YAHAY
Eliseo Emma Kamgang 13 April 2019
Halkan waxaa ku qoran astaamaha kansarka oo aanad iska indha tirin. U fiirso dareenka ugu dambeeya sababtoo ah si sahlan ayaa loo fahmi karaa.
1 - Daalka joogtada ah wuxuu noqon karaa ciladda muhiimka ah ee leukemia iyo kansarrada caloosha ama caloosha. Waxay muujin kartaa si ka duwan daalka maalin kasta. ... Mararka qaarkood waxaa sabab u ah dhiig-luminta, ma aha mid cad. ... Calaamadaha Xanuunada ee Niyadjabka Waa inaad joojisid inaad iska dhigno ...
1- The cagaha oo barara, tusaale ahaan, ma aha daruuri calaamad kansarka, laakiin dhibaatooyinka soo raaca daawaynta kansarka, laakiin haddii aad isku aragto calaamadaha aan la sharrixin ... 10 calaamadaha lagu dhinto kansarka maqaarka, aad u baahan tahay si aad u ogaado waqti hore ...
2- Haddii aad waayo-aragnimo ay caloosha oo, shuban, ama isbedel ku size ee saxarada sii dheerayn, waxaa laga yaabaa in kuwa caqliga leh inay la tasho dhakhtar. Kuwani waa calaamadaha kansarka mindhicirka.
3 - Dhiig-bax aan caadi ahayn marwalba waa u qalmaan in la barto, xitaa haddii aysan calaamad u ahayn kansarka. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay sidoo kale ku dhici kartaa kansarka hore ama ka sii sareeya. Qufac
In kastoo qandhadu aad u badan tahay marxalado hor leh, waxay sidoo kale noqon kartaa calaamadaha hore ee kansarka dhiigga, sida leukemia ama lymphoma. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad la kulanto badanaa ...
5- Marka aad heysato freckle ah, mid qoon leh, ama bar ah in beddelayo midabka, size ama qaabka, ama haddii uu ku guuldareysto inuu ku laayeen adag, waxay leeyihiin waxaa laga fiiriyaa melanoma ama wax kale kansarka maqaarka. Si kastaba ha ahaatee ... Mushaharka in calaamadaha iyo astaamaha dareenka ka mid ah: madow maqaarka, hurdi ama casaada, cuncun, dhiigbaxa, iwm
6 - Xoqmo adag ama buste aan la shaacin. Jirkaaga si joogto ah u baaro. Kaloorid ama dhumucidu waxay noqon kartaa calaamad hore ama waqti dambe oo kansar ah waana in si dhaqso ah loogu soo sheego dhakhtarka. U fiirso fiiro gaar ah ... Ha welwelin isla markiiba. Qaar badan oo ka mid ah kuwa ...
7- Haddii xanuunka waa la sharrixin oo uusan iska tagaan ama aadan hagaajiyo daaweynta, waa harbinger ah. Iyada oo ku xiran meesha uu xanuunka ku yaal, ... ujeedada macluumaadka kaliya. Waa inaadan waxba samayn ka hor intaadan la tashan xirfadle caafimaad.
Laakiin haddii 8- dibiro ha baaba'aan dhowr maalmood oo waa la xiriira in aan muddo, tani waxay noqon kartaa calaamad ka mid ah kansarka ganaca. Marka burooyinka ay soo baxaan, waxay keeni karaan caloos ...
Banana Peel aad iyo aad u faa'iido badan
Caafimaadka: Daawada PNEUMOREL ayaa laga mamnuucay Cameroon
Jooji isticmaalka lambarrada PIN ee cayayaanka ah! (iyo halkan sida loo sameeyo)
Qalabka baaritaanka kansarka mindhicirka
Venezuela vs Peru - Warbixinta ciyaarta kubadda cagta - 15 June 2019 - ESPN
(VIDEO) Akhri Vega & # 39; kuleylka & # 39; Instagram ayaa qabanqaabinaysa xayawaanka duurjoogta - VIDEO
Mvangan: shaqaalaha bulshada ee dugsiga qalabka kombiyuutarka cusub
Cameroon - Job Offers204
aan caadi ahayn21
Shirkadaha Shirkadda Dalxiiska1
DADKA & LIFESTYLE5,282
Daawooyinka dabiiciga ah63
DIB U EEGID AFRICAN PRESS132
Video dheeraad ah1,440